जनभावनाको उपहाँस | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
देशको मूल कानून संविधानले आम सर्वसाधारण नेपालीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्नका रुपमा वर्णन गरेको पढ्न पाइन्छ । जन निर्वाचनको माध्यमबाट अभिमत प्रकट हुने विश्वव्यापि मान्यता नै हो । त्यसरी निर्वाचित प्रतिनिधि जनभावना बुझेको र सोही अनुरुप क्रियाकलपमा रही कर्तव्य पालन गर्ने अनिर्वायता कही कतै आत्मसात भएको पाइदैन । निर्वाचित भएपछि सिंहासनारुढ सत्ताधारी जस्तै रवाफ, लवाई खवाई कमाई प्रचुर मात्रामा आर्जन गर्ने त्यसैले बलमा शक्ति प्रदर्शन र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति जनाततै व्याप्त छ, माफिया, बाहुवली शोषण र दमन गर्ने क्षमता भएका भ्रष्टाचारीहरु सर्वत्र व्याप्त भएपछि त्यो भन्दा ठूलो उपहास के नै हुन सक्ला ।
जनभावनाको उपहाँस निरन्तर भइरहेको छ करोडौं अरबौं रकम राष्ट्रको ढुकुटीबाट बक्स दिने समाचार निरन्तर सुन्नमा आईरहन्छन् ।
सरकार हाक्ने प्राणीहरुका बोली बचन र व्यवहार पत्यार नलाग्ने गरी नांगिएका छन् । अदालती आदेश निर्णयहरुमा कटाक्ष हुने क्रम रोकिएको छैन । योग्यता क्षमता दक्षता भन्दा पनि भागबण्डा एक मात्र मापदण्ड बनेपछि वर्ग विभाजन र संघर्ष प्रारम्भ विन्दुबाट अघि बढ्छ । वर्तमान समय शान्त स्थिर शुशाशित घोषित हुने गरे पनि भित्र भित्रै ज्वालामुखी सल्केको आभाष त्यस्तै जनभावना र चाहना के हो ? त्यसको प्रतिविम्ब यथेष्ट रुपमा आई रहदा पनि वेवास्ता भए
परिणाम अकल्पनीय हुने तर्फ शक्ति पैसा र महुँयाका वलले उन्मक्त भएका प्राणीहरुमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको देखिएन । विभिन्न परिवर्तन भए पात्र फेरिए नारा लगाईए तर मूल मर्म र प्रवृत्ति बढोत्तरी हुदै गएको देखिन्छ । बाहूवली मौका परस्तहरु अफ्रिकाको जंगलहरुमा पशु पंक्षीले रंग फेरे झै कुन बेला को के हुने हो अन्दाज गर्न मुश्किल पर्ने गर्छ । आम जनता रैतिबाट मालिक भए पनि मृगतृष्णा जगाए पनि पानीको अत्तोपत्तो छैन । खाडी मुलुकहरुमा दासत्वको जीवन विताएर भए पनि देश छोड्न बाध्य भएका लाखौं लाखको संरक्षक बारिस कही कतै देखिदैन, जसरी भए पनि ब्रहमलुट गर्ने अनेक छिद्रहरुबाट दोहन गर्ने सिस्टम विकसित हुदै गए पनि सिमित वर्गका लागि मात्र आरक्षित भए जस्तो छ, खाद्य संप्रभुता, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका मौमिक हक पुर्ण रुपमा पालन भएका देखिन्छन् तर त्यो एक निश्चित संभ्रान्त वर्गका लागि मात्र छ बाँकी करोडौंको त कर्तव्य मात्र जसरी भए पनि त्यस्ता ब्वासाँहरुका लागि साधन र सम्पत्ति जुटाउने मात्र छ अधिकार आम जनका लागि बनेकै होइनन् त्यसैले संविधान पनि के भन्छ त्यो आम जनभावनासँग कुनै सरोकार्य रहेन किनभने त्यो हाम्रा लागि आएकै होईन ।
यस्तो नैराश्यता कुण्ठा कसरी पैदा हुन्छ ? यो स्वतः स्फुर्त रुपमा अनुभूति गर्ने विषय भित्र पर्दछ । सत्ता उन्माद एकातर्फ छ भने हातबाट नागमणि फुत्केका घायल कायल जसरी पनि प्राप्त गर्न तल्लीन हुँदा आम जनभावनाको उपहास भईरहेको दिनहुँका घटनाक्रमबाट पुष्टि हुदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सत्ताको उन्माद छिपाएको पनि देखिदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बनेपछि उन्मक्त हुनु स्वभाविक छ, त्यसैले ऐश्वर्य पूर्तिका लागि कर माथि कर थुपार्दै भ्रष्टाचार पूर्ति हुने गरेका दृष्य एकातर्फ छन् भने भागबण्डा र लूटमा कसले कति हिस्सा पाउने भनि विभिन्न तहमा अन्तरद्वन्द प्रारम्भ भइसकेको छ ।
अपराधिहरु राष्ट्रध्वज धारण गर्छन निहत्ता जनता थिचोमिचोमा पर्छन, हालै २ नं. प्रदेशमा अदालतबाट वारण्ट जारी भएका प्राणी मन्त्री भए, उज्जवल हत्याका दोषी कैदमुक्त भई बालकृष्ण फुलमालाबाट अभिनन्दित हुन्छन्, रेशम चौधरी नायकका रुपमा चर्चित छन्, । पहुँच नभएकाको इज्जत मर्यादा खतरा विन्दु पार गर्दै आत्मसम्मान जोगाउन असंभव बन्दै गएको छ । एकजना मन्त्रिले दिएको भाषणको परिणाम धुरु धुरु रुदै पद गुमाए तर प्रश्न यो उठ्छ कि त्यस्तो भाषण गर्ने पृष्ठभूमी र कारक तत्व के होला ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । दुर्गा परसाई भन्ने खतरनाक मानवबाट भाषणको अंश तयार भयो उनकै कारण डा. गोविन्द केसी मृत्यु शैय्यामा पुगेको छिपाएर छिप्ने विषय रहेन, जे मा पनि कमिशन लूट घूस, पदवी पाउनका लागि रकम मोल मोलाई खुलेआम छ । रोक्ने सामर्थ आउने बाटो पनि रकमले नै खोज्छ, कतिपय निर्णयहरु विवादास्पद हुने कारण प्रष्टै छ । आश्चर्य लाग्दछ व्यक्तिका रकमले व्बासाँहरु के गर्ने होलान सोच्न लागेमा ग्लानीले मन भरिएर आउँछ । विचार लेख त्यसै, अभिव्यक्त हुदैनन् । निकट भविष्यमा नेपाल नामको मुलुकले खतरनाक तरंगहरु हेर्न, भोग्न अवश्यमभावि छ । जनभावनाको उपहाँस खेर जादैन, आजका नियन्ताहरु इतिहास भुले जस्ता छन् । समय कसैका लागि पनि एकनाश रहदैन, बाहुबलीहरुका लागि भाग्ने बाटा समेत बन्द हुन बेर लाग्ने छैन ।
← स्वरोजगारी यूवा युवतीलाई किन सताइन्छ
देशमा बैंक र जग्गा मात्र लुटिएन अरु थोक पनि लुटिएको छ →